12 ဥရောပတွင်အအေးဆုံးရပ်ကွက်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 12 ဥရောပတွင်အအေးဆုံးရပ်ကွက်များ
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ရုရှားခရီးသွားရုရှား, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ဥရောပမှာလည်ပတ်ဖို့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့မြို့တွေအများကြီးရှိပါတယ်. မြို့နှင့်လမ်းတိုင်းသည်ကိုယ်ပိုင်စရိုက်နှင့်ကျက်သရေရှိသည်. တက်ကြွတယ်, ကော်ဖီဆိုင်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်, ဖက်ရှင်ဆိုင်များ, လမ်းအနုပညာ, ခေတ်မီအနုပညာပြခန်းများ, နှင့် Eco-friendly, သင်ဒါတွေမရောက်ဖူးဘူးဆိုရင် 12 ဥရောပရဲ့အအေးဆုံးရပ်ကွက်, ဤတွင်သင်၏ရေပုံးစာရင်းကိုချရန်အကြောင်းရင်းအချို့ရှိသည်.
1. ဥရောပတွင်အအေးဆုံးရပ်ကွက်များ: Neukolln, ဘာလင်
အဓိကဝေးသည် ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှု ဘာလင်, Neukolln ရပ်ကွက်သည်ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်. အေးချမ်းသောရပ်ကွက်သည်အဟောင်းနှင့်အသစ်ကြားရောနှောနေသည်, ယဉ်ကျေးမှုများ, မြို့ပြ, နှင့်အပန်းဖြေစိမ်းလန်းသောနေရာများ.
Kababs, အနုပညာပြခန်း, ခေါင်မိုးပေါ်အရက်ဆိုင် စိမ်းလန်းသောပန်းခြံများအနီးတွင် Neukolln ရပ်ကွက်သည်ဥရောပ၌အအေးချမ်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်စေသည်. နေ့တစ်နေ့တာအပြင်မှာကြီးမားတဲ့ Tempelhofer Feld, Britzer Garden သို့မဟုတ် Richardplatz ရွာ (သို့) Klunkeranich ကားပါကင်သို့ခေါင်မိုးဘားသို့လှည့်သွားနိုင်သည်။.
2. Holesovice, ပရာ့ဂ်
အစိမ်းရောင်ပန်းခြံများ, မြစ်များနှင့်အတူဘီယာဥယျာဉ်များ, ခေတ်ပြိုင် အနုပညာပြတိုက် အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည် လျှို့ဝှက်ကျောက်မျက် Prague ၏အအေးဆုံး Holesovice ရပ်ကွက်၌. Holesovice သည်ချက်နိုင်ငံမှအနုပညာရှင်များနှင့်လူငယ်မိသားစုများဖြစ်သည်, Letna Park မှာသူတို့ရဲ့အားလပ်ချိန်တွေကိုကုန်ဆုံးပြီးဘေးပတ် ၀ န်းကျင်ကဘီယာဆိုင်တော်တော်များများမှာထမင်းစားကြတယ်.
တစ်ချိန်ကပရာ့ဂ်စက်မှုဇုန်သည်ယနေ့ခေတ်တွင်ဒီဇိုင်နာများနှင့်တီထွင်ဖန်တီးလိုစိတ်များကိုဖန်တီးနိုင်သောနေရာတစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်. ဒါကြောင့်, ဥရောပရှိအအေးဆုံးရပ်ကွက်များထဲမှထူးခြားသောကဖေးများရှိသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ, ဒီဇိုင်းဆိုင်များ, နှင့်အနုပညာစင်တာများ.
3. ဥရောပတွင်အအေးဆုံးရပ်ကွက်များ: Ostiense, ရောမမြို့
Ostiense သည်ပုံမှန်အီတလီရပ်ကွက်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်အဲဒါကအဲဒါကိုအတိအကျထည့်ထားတယ် 10 ဥရောပရဲ့အအေးဆုံးရပ်ကွက်. တစ်ဦးက ယခင်စက်ရုံသည်အနုပညာပြတိုက်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်, စမ်းရေတွင်းအစားလမ်းအနုပညာ, ခေတ်မီကော်ဖီဆိုင်များ, နှင့် 1 အချစ်ရေးကဗျာဆရာ Keats နှင့် Shelley တို့သည်သူတို့၏ထာဝရအိပ်စက်ခြင်းနေရာ Ostiense ကိုတွေ့ရှိသောကက်သလစ်ဘာသာမဟုတ်သောသင်္ချိုင်း.
တစ်ချိန်ကအီတလီမြို့တော်၌မီးခိုးရောင်နေရာသည်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအရောင်များနှင့်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသောနေရာတစ်ခုအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားသည်. ထို့အပြင်, ဤတွင်သင်သည် Caius Cestius ၏ထူးခြားသောပိရမစ်ကို သွား၍ ၎င်း၏နံရံဆေးရေးပန်းချီများကိုလေးစားနိုင်သည်, အီတလီအစားအစာများအတွက် Eataly သို့သွားသောလမ်း. ဒေသခံတစ်ယောက်လိုနေချင်ရင်, ခေတ်မီ Ostiense ရှိတည်းခိုခန်းသည်ရောမမြို့ရှိလူစည်ကားသောခရီးသွားခရိုင်များထက်များစွာစျေးသက်သာသည်.
4. South Pigalle အိမ်နီးနားချင်း Paris
လမ်းလျှောက်နေသည် SoPi ကိုဆင်း, Rue des Martyrs သို့, အိမ်ကျော် 200 ကဖေး, chocolatiers, ဘားများ, South Pigalle သည်ပဲရစ်ရှိနေရာဖြစ်သည်. South Pigalle အပြင်စားကောင်းသောက်ဖွယ်ကောင်းကင်ဖြစ်ခြင်း, အေးမြသောရပ်ကွက်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပြတိုက်များနှင့်အနုပညာများကိုရှာဖွေနိုင်သောနေရာဖြစ်သည်. အထူးခြားဆုံးပြတိုက်များထဲမှတစ်ခုမှာ Romantic Life ပြတိုက်ဖြစ်သည်. Musee de La Vie Romantique တွင်ပြင်သစ်သမိုင်း၌အချစ်ရေးကာလအကြောင်းသင်၏အသိပညာကိုချဲ့ထွင်နိုင်သည်.
ကောင်းမွန်သောနေထိုင်မှုမှအနားယူရန်, Pigalle ၏ရောင်စုံဘတ်စကတ်ဘောကွင်းသို့သင်သွားနိုင်သည်. Pigalle ၏ဘတ်စကတ်ဘောကွင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ထားသည်, အရောင်အသွေးစုံလင်စွာဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်, အကောင်းဆုံးဘတ်စကတ်ဘောကစားပွဲသို့. ပါရီသည်ကြီးမြတ်သည် အားလပ်ရက်ခရီး အများဆုံးထဲကတစ်ခုပါ ဥရောပ၌ကြီးကျယ်သောဘတ်စကတ်ဘောကွင်းများနှင့်အံ့သြဖွယ်အားလပ်ရက်နေရာများ.
5. ဥရောပတွင်အအေးဆုံးရပ်ကွက်များ: Arbat, မော်စကို
ရောင်စုံနှင့်သွက်လက်သော Arbat ရပ်ကွက်သည်လူစည်ကားသော Moscow မြို့လယ်၌လေကောင်းလေသန့်ရစေသည်. Arbat သည်ကျက်သရေအပြည့်နှင့်တွေ့လိမ့်မည်, ရောင်စုံအဆောက်အ ဦး များနှင့်အတူ, ကဖေး, နှင့်လမ်းအနုပညာ. Arbat တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်နေစဉ်, မင်းဟာ cosmopolitan မြို့တော်ရဲ့ ၀ ိညာဉ်ကိုတွေ့လိမ့်မယ်. နာမည်ကျော် Old Arbat လမ်းသည်မော်စကိုရှိသမိုင်းဝင် Arbat ရပ်ကွက်၌တည်ရှိပြီး၎င်း၏အချက်အချာကိုကုန်သည်ဗဟိုအဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားသည်။, ၁၅ ရာစုမှ.
ဒီနေ့ခေတ်, Arbat ရပ်ကွက်သည်လှပသောဖက်ရှင်ဆိုင်များနှင့်ပြည့်နေသည်, အမှတ်တရပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ, လက်မှုပညာများ, နှင့်အခြားဘဏ္manyာများစွာ. ဖြည့်စွက်ကာ, ဤဒေသသည်အလွန်ခရီးသွားနေစဉ်, အဲဒါကိုပြန်ရှာတွေ့လိမ့်မယ်, နှင့်ရှုခင်း. Arbat ၏အကောင်းဆုံးကိုခံစားရန်, မင်းရဲ့မော်စကိုခရီးမှာရက်အနည်းငယ်ကြာနေပါ, အနည်းဆုံး. ဒီလမ်း, သင်မော်စကို၏အကောင်းဆုံးနှင့်တစ် ဦး ၏အလှကိုရှာဖွေနိုင်သည် ရုရှား၌လည်ပတ်ရန်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာများ.
ငယ်ရွယ်ပြီးပျော်စရာကောင်းသည်, ဘူဒါပက်စ်ရှိခရိုင် ၇ ခုသည်ခရီးသွားများအတွက်အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်သည်. အရက်ဆိုင်ကြီး, Budapest ရှိအကောင်းဆုံးလွတ်မြောက်ရန်အခန်းများ, ညနေဈေးတစ်ခု, နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ရပ်များ, ဒီရပ်ကွက်ကအမြဲဆူညံနေတယ်, ကောင်းတဲ့နည်းနဲ့. ဤအေးချမ်းသောရပ်ကွက်သည် Budapest ရှိဂျူးရပ်ကွက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်မဟာတရားဇရပ်ကိုလည်းသွားလည်နိုင်ပါတယ်, ကိုယ်ပိုင်မှတ်တိုင်တစ်ခု.
ထို့အပြင်, လမ်းဟောင်းများသည်ဟန်ဂေရီယဉ်ကျေးမှုကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေသောမြေသြဇာတစ်ခုဖြစ်လာသည်. စားသောက်ဆိုင်များအပြင်ဈေးဆိုင်များလည်းရှိသည်, ၌အဓိကဆွဲဆောင်မှု 7th ခရိုင်သည်ပျက်စီးနေသောအရက်ဆိုင်များ. မင်းရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပပါ, သို့မဟုတ်ထူးခြားသောဘားဟောင်းတစ်ခုတွင်မွေးနေ့ bash သည် Budapest ၏အအေးဆုံးရပ်ကွက်အတွက်အထူးအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်.
7. ဥရောပတွင်အအေးဆုံးရပ်ကွက်များ: Langstrasse Zurich
အရှည်ဆုံးလမ်းအဖြစ်ဘာသာပြန်သည်, Zurich ရှိ Langstrasse ရပ်ကွက်သည်အချိန်နှင့်တပြေးညီနိုင်ငံအကြောင်းသင်သိသမျှအရာအားလုံးကိုဖျက်စီးသည်. Langstrasse သည် Zurich ၏လူဆိုးကောင်လေးဖြစ်သည်, တင်ပါးဆုံ, စွန့်စား, တောက်ပသောနီယွန်မီးများနှင့်ပါတီပွဲအတွက်အမြဲအဆင်သင့်. Langtrasse တွင်တစ်ခုရှိသည်အံ့သြဖွယ်အစားအစာနေရာများ, ဘား, nightcap အတွက်ကလပ်များနှင့်, ကိုယ့်ရွေးပါ.
ထို့အပြင်, အအေးဆုံးရပ်ကွက်သည်တစ်ခုဖြစ်သည် ဥရောပ၌အချစ်ဆုံး LGBT နေရာများ. LGBT နှင့်လိုက်ဖက်သော Les Garcons bar/pizza နေရာတွင်ဤနေရာတွင်သင်၏ groove ကိုသင်ရနိုင်သည်, ဥပမာ. ကောက်ချက်ချရန်, ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရပ်ကွက်သည်အိပ်စက်ရန်ခက်ခဲပြီး၎င်း၏တိုင်းရင်းသားစားသောက်ဆိုင်များစွာတွင်သင့်ကိုကျွေးမွေးလိမ့်မည်, ပါတီများက, ပြီးနောက်ပါတီပွဲများ.
စိမ်းလန်းသောနေရာများ, လှပသောဗိသုကာ, နှင့်ချစ်စရာကောင်းသောရွာငယ်, Amsterdam-Noord သည်အရာအားလုံးရှိသည်. အေးချမ်းသောရပ်ကွက်သည် River IJ ကို ဖြတ်၍ တည်ရှိသည်, ထို့ကြောင့် Noords သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည် ပျော်ပွဲစားအစက်အပြောက် နှင့်တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲနေရာများ. ဤဆွဲဆောင်မှုများအပြင်, Amsterdam-Noord သည်ဥရောပ၌အမြင့်ဆုံးလွှဲရန်နေရာဖြစ်သည်, adrenaline ချစ်သူများအတွက်.
သို့သျောလညျး, သင်ပိုမိုစီစဉ်ပါက တက်ကြွအားလပ်ရက် ထိုအခါမြစ်သည်သင့်တော်သည် ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ. စက်ဘီးစီးတယ်, ပြေးနေသည်, လှေနှင့်ပင်, River IJ သည်ပြီးပြည့်စုံသည်. အဓိကအချက်ကတော့ Amsterdam-Noord ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့ Amsterdam မြို့အတွင်းဒတ်ခ်ျကမ္ဘာငယ်တစ်ခုပဲ. ရွေးချယ်စရာများသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်, နှင့်လေထုသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်, ခရီးသွားများသည်ဥရောပရှိအအေးဆုံးရပ်ကွက်များထဲမှတစ်ခေါက်ပြန်လာကြသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ.
9. ဥရောပတွင်အအေးဆုံးရပ်ကွက်များ: Shoreditch လန်ဒန်
ခရီးသွားအများစုသိပါတယ် Shoreditch အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Brick Lane စျေးကွက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်. သို့သျောလညျး, Shoreditch သည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောလွတ်လပ်သောဆိုင်များတွင်တစ်မူထူးခြားသောအပိုင်းအစများအတွက်စျေး ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်. ဤသည်မှာဂရပ်ဖီတီခြယ်ထားသောရပ်ကွက်၏ထူးခြားသောဘက်များ၏ဥပမာတစ်ခုသာဖြစ်သည်. Shoreditch သည်ပုံသဏ္ဌာန်မပြည့်စုံနိုင်ပါ, ဒါပေမယ့်သူ့မှာကိုယ်ပိုင်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဆိုတာသေချာတယ်.
Shoreditch သည်ပုံမှန်ဂန္ထဝင်အင်္ဂလိပ်ရပ်ကွက်မဟုတ်ပါ, ၎င်းသည်ဒေသခံအနုပညာရှင်များ၏အိမ်ဖြစ်လာသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, ဤမြို့ပြရပ်ကွက်သည်လမ်းဘေးစျေးသို့မဟုတ် pop-ups များကိုစမ်းရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်, ခေါင်မိုးပေါ်ကရုပ်ရှင်ရုံမှာရုပ်ရှင်တစ်ကားကိုဖမ်းပြီးထောင့်တစ်ဝိုက်မှာဝှက်ထားတဲ့နံရံအနုပညာကိုရှာကြည့်ပါ. ကောက်ချက်ချရန်, Shoreditch ၏အထူးဇာတ်ကောင်သည်လန်ဒန်ရှိအအေးဆုံးရပ်ကွက်ဖြစ်သည်.
10. Findhorn, စကော့တလန်
လှပသောစကော့တလန်ကမ်းရိုးတန်းတွင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုရှုမြင်သည်, Findhorn သည်မှော်ဆန်သည်. Morayshire တွင်တည်ရှိသည်, အချို့ကအဲဒါကိုပြေလည်မှုလို့ခေါ်တယ်, မြို့ပြအသုံးအနှုန်းထက်ရပ်ကွက်တစ်ခု. Findhorn သည်စိတ်ကူးယဉ်အားလပ်ရက်ခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်ပင်လယ်ကမ်းခြေအားလပ်ရက်ခရီး. ဒီမှာ, ကမ်းခြေမှာရေကစားအပျော်စီးရန်သို့မဟုတ်အပန်းဖြေရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်.
ထို့အပြင်, Findhorn တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရွာရှိသည်, အပန်းဖြေခရီးသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်ခေတ်စားသည်. ဤစိမ်းလန်းသောအရာသည်သက်တောင့်သက်သာရှိသောဧရိယာသို့ခေတ်မှီသောရသကိုပေးသည်, ကြီးကျယ်သောရှုခင်းနှင့်လေထုနှင့်အတူ.
11. ဥရောပတွင်အအေးဆုံးရပ်ကွက်များ: Vesterbro, ကိုပင်ဟေဂင်
Vesterbro တွင်နေထိုင်သောမည်သူမဆိုဤအေးမြသောရပ်ကွက်၌အလွန်ကွဲပြားသောရပ်ကွက်ငယ်များရှိသည်ဟုဆိုလိမ့်မည်. တစ်ယောက်ကငယ်သေးတယ်, ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်, တစ်ချိန်ကကိုပင်ဟေဂင်၏မီးနီခရိုင်နှင့်အခြားတစ်ခု၌ပြင်သစ်လူမျိုးတို့အကြိုက်ရှိသည်. Vesterbro သည်ဆန့်ကျင်ဘက်များနှင့်ပြည့်နေသည်, ဒါကြောင့်ကိုပင်ဟေဂင်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်တဲ့ဘယ်သူမဆိုသူတို့နှစ်သက်တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မယ်.
တစ်နည်းပြောရရင်တော့, Vesterbro သည်ဥရောပရှိအအေးဆုံးရပ်ကွက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းတွင်လူတိုင်းအားအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုရှိသည်. စိမ်းလန်းသောနေရာများမှကောင်းမွန်သောစားသောက်ဆိုင်များသို့, chic ဆိုင်များ, ဒေသခံများနှင့်အတူစားသောက်နိုင်သော Absalon ကွန်မြူနတီအိမ်, Vesterbro ၏အသိုင်းအဝိုင်းသည်အလွန်ကြိုဆိုပြီးပေါ့ပါးသည်. ထိုကွောငျ့, Vestrbro ကထိပ်ဆုံးမှာရှိနေတာမဆန်းပါဘူး 10 ဥရောပရဲ့အအေးဆုံးရပ်ကွက်တွေကနှစ်စဉ်.
12. Porta Venezia, မီလန်
Milan ၏ဖက်ရှင်အကျဆုံးရပ်ကွက်, Porta Venezia သည် Milan's Fashion Week ကိုလက်ခံကျင်းပပြီးထိပ်မှပေါက်ကွဲသံများဖြင့်ပိတ်လိုက်သည် 12 ဥရောပရဲ့အအေးဆုံးရပ်ကွက်. အတတ်ပညာ, အီတလီအစားအစာ, မီလန်၏အကောင်းဆုံးစျေး ၀ ယ်နေရာများမှထောင့်တစ်ဝိုက်, ကျောထောက်နောက်ခံရှိသော Porta Venezia သည်အီတလီနိုင်ငံသာဖြစ်သည်, လူစည်ကားသောခရီးသွားဌာနနှင့်ဝေးသည်.
Port Venezia သည်အိမ်ကြီးများလှည့ ်၍ အနုပညာပြခန်းများရှိသည်, ကဖေး, နှင့်ဥယျာဉ်များ, အံ့မခန်း Giardini Publici ကဲ့သို့. Porta Venezia ၏ကြီးမားသောပတ်ဝန်းကျင်သည်ဒေသခံများကိုဆွဲဆောင်သည်, နိုင်ငံခြားသားများ, နှင့်အပန်းဖြေခရီးသွားများ, ရောနှောနေသည်, မီလန်ဂေးချီတက်ပွဲအတွင်းပါတီနှင့်, ထိုအချိန်ထိနေ့တိုင်း. ဒါကြောင့်, မင်းaစီစဉ်နေတယ်ဆိုရင် တနင်္ဂနွေထွက်ပြေး Milan တွင်, တစ်ပတ်ကြာအောင်လုပ်တာပိုကောင်းတယ်, အနည်းဆုံး.
ငါတို့မှာ တစ်ဦးကရထား Save မင်းခရီးသွားဖို့စီစဉ်တာကိုကူညီရတာဝမ်းသာလိမ့်မယ် 12 ဥရောပရဲ့အအေးဆုံးရပ်ကွက်.
ငါတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်“ ဥရောပ၌အလန်းဆုံးရပ်ကွက် ၁၂ ခု” ကိုမင်းရဲ့ site ပေါ်မှာတင်ချင်လား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fcoolest-neighborhoods-europe%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
cool coolestneighborhoodsEurope CoolNeighborhoods တင်ပါးဆုံ Neighborhoods Trendyneighborhoodseurope